DF oo diyaarisay qorshe ciidamo cusub lagu geynayo Marka iyo maamulka degmada oo diiday – Radio Daljir
DF oo diyaarisay qorshe ciidamo cusub lagu geynayo Marka iyo maamulka degmada oo diiday
Seteembar 1, 2013 2:27 b 0
Marka, September 1, 2013 – Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qorshe cusub u diyaarisay gobolka shabeelaha Hoose gaar haan deeganada ku dhow Marka, si xal buuxa looga gaaro colaad beelleed ka aloosnayd halkaas.
Magaalada Marka waxaa ku sugan masuuliyiin ka tirsan wasaarada arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya, kuwaas oo howsha dhex-dhexaadinta ah u jooga Marka, masuuliyiinta ayaa shaaciyey in deegaanka laga kaxayn doono ciidanka deegaanka lana keeno doono ciidamo cusub.
Gudoomiyaha degmada Marka Maxamed Cusmaan Yariisow ayaa ka hadlay qorshaha cusub ee dowladda, wuxuu ku tilmaamay mid aan suurta-gal ahayn isagoo ku gacan sayray nidaamka ay dowladdu ku doonayso in ay ciidamo cusub ku keento deegaanka.
? Suurta-gal ma aha mana aqbali karno in ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka la keeno Marka, inta laga kaxeeyo kuwii hore, taas ma dhacayso mana aqbali doono? ayuu yiri Maxamed Cismaan Yariisow.
Arritan ilaa hadda kama aysan hadlin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaase weli jirta xiisad collaadeedka gobolka iyo waan waanteeda oo socota, lamana oga sida uu ku hir-geli karo qorshaha cusub ee wasaarada arimaha gudaha.
Wefdigii uu horkacayey abaandulaha ciidanka XDS oo xalay la hadlay shacabka Caabduwaaq (Sawirro)
Taraafikada gobolka Banaadir oo Biro iyo dhagxaan ka aruuriyey Jidadka waa weyn ee Muqdisho